Kulan looga hadlayo adkaynta Amniga oo lagu qabto degmada Qardho – Radio Daljir
Abriil 27, 2013 3:53 b 0
Qardho, April 27- Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaa maanta lagu qabtay kulan ballaaran oo looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa loona adkayn lahaa amniga gobolka.
Kulankani waxaa soo abaabulay maamulka degmada Qardho iyo kan gobolka Karkaar waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada.
Gudoomiyaha degmada Qardho Maxamed Siciid Ciise (Hogaamo-laroor) oo furitaankii shirkaasi ka hadlay ayaa qaybaha bulshada gobolka Karkaar iyo degmada Qardhaba ugu baaqay inay maamulka kala shaqeeyaan arimaha amniga isla markaana ciidanka dawladda ay la shaqeeyaan.
Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Quraan Maxamed Aaden ayaa isaguna dhankiisa sheegay inay gacan bir ah ku qabanayaan amniga, gudoomiyaha ayaa dhalinyarada deegaanka oga digay inay ku kacaan falalka sahlaya in deegaanka ay ka dhacaan amni xumo ka dib boqolaal qoys oo ka soo xagaa baxaya kulaylaha magaalada Boosaaso.
Shirarka lagaga hadlayo xoojinta amniga Qardho ayaa ku soo aadaya xili dadweynaha reer Boosaaso ay billaabeen inay intooda badan u soo guuraan deegaanada ka baxsan magaalada dekaddaa, taasoo xiligan uu ka biloowday xiliga kulaylaha.